မယ်လိုဒီမောင်၏ ငြိမ်းချမ်းသံစဉ်: World Blog Day အထိမ်းအမှတ် SG MMbloggers gathering party
all looked happy. nice.amarvellous barbecue party !. noticed that it's in open space. signs of freedom and free! wondering some ?Singaporean Chinese also enjoying, not sure.your style also good. healthy and strong teeth with white belt :)
မမီရေ -ဒီလိုမှတ်တမ်းတစ်ခု၊ အစီအစဉ်တစ်ခု ဖြစ်မြောက်အောင်မြင်အောင် အဓိကကြိုးပမ်းကူညီပေးခဲ့ မမီ၊ စပွန်ဆာတွေနဲ့ တက်ရောက်လာပေးကြတဲ့ သူငယ်ချင်းတွေအားလုံးကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ဒီပွဲလေးကိုကြည့်ပြီး မနှစ်က ရန်ကုန်ပွဲတုန်းက ဘယ်လောက်တောင် ပျော်စရာကောင်းခဲ့မယ်ဆိုတာ ကျွန်တော်ခန့်မှန်းနိုင်ပါတယ်။ သူဖြစ်စေချင်တဲ့ “စည်းလုံးတဲ့ Blog အသိုင်းအဝိုင်းလေး” တဖြည်းဖြည်းပုံပေါ်လာနေတာကို သိရင် ကိုနေဘုန်းလတ်တစ်ယောက် အတိုင်းမသိ ဝမ်းသာနေမယ်လို့ ကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်။
ကျွန်တော်လဲ အိမ်ပြန်ရောက်တော့ ခေါက်ဆွဲပြုတ်စားလိုက်ရသေးတယ် နောက် ပုံတွေတင်၊ ပို့စ်လေးတစ်ခုရေးနဲ့ ည ၁ နာရီမှ အိပ်လိုက်ရပါကြောင်း၊ နောက် မနက် ၅ နာရီလန့်နိုးလာတော့ ညက မအိပ်ခင် Upload လုပ်ထားတဲ့ ပုံတွေရဲ့ လင့်ကို အိပ်ချင်မူးတူး အီးမေးပို့လိုက်ရပါကြောင်း ...
ကျွန်တော် ပီကာဆာကပုံတွေမှာ လူနာမည်တွေ ကျိုးစားပြီး တွဲထားတယ်ဗျ စစ်ပေးပါဦး။
မမီရေ.. ဒီနေ့မှ မီမီ့ဘလော့ကို ၀င်ကြည့်မိတယ်။အားရစရာကြီးပါလားကွယ်တို့။ တို့ကို အပြစ်မတင်ပါနဲ့နော်။ မနေ့က အိုရင်း တီသွားလို့ပါ။ဓာတ်ပုံတွေကိုလဲ အခု ထမင်းစားပြီး ထိုင်ကြည့်နေတယ်။ ရိုက်တဲ့သူက အတော်ရိုက်တတ်တာပဲ။ ကြက်တောင်ပံဆွဲနေတဲ့ပုံနဲ့ အန်းကုန်းဘိုးဘိုး ရယ်နေတဲ့ပုံနဲ့ ဟိ (ချတာ)
ချစ်မကြီး .. ပျော်ဖို့ကောင်းတယ်နော့
ပျော်စရာကြီးနော်။ ကလူသစ်လဲ ပါချင်လိုက်တာ ဟီး
Happy MBS gathering, thanks for organizers and participants. Thanks Ma Mi.
ဒီလိုပျော်ရွှင်ဖွယ်ပွဲလေးကို ဖြစ်မြောက်အောင် ဆောင်ရွက်ပေးတဲ့ လူအားလုံးကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်.. နောက်ပွဲများရှိရင် ခေါ်ပါအုံးနော့် အကင် ထပ်ကင်ကျွေးမယ်လေ